Health Archives - Page5of5- Internet Sansar
October 7, 2019	Health Comments Off on यसरी सुत्न नजान्दा हृदयघात र सुगर, प्रेसर : मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोईराला
काठमाडौ । अहिले मानिस धेरै नै व्यस्त रहने भएको हुँदा स्वास्थ्यको चिन्तालाई ख्याल गर्न सक्दैन । सुत्ने, खानपान लगायतका कुराहरुमा अहिले धेरैले ख्याल गर्दैनन् । अहिले खापान र आरामका कारणले गर्दा धेरै बिरामी हुँदै आएका छन् । अब दैनिक ६ घण्टा भन्दा कम सुत्नेहरुका लागि एकदमै दुःखद खबर आएको छ …
June 1, 2019	Health Comments Off on थाइराइडका बिरामीले खानै पर्ने खानेकुरा, सेयर गरेर अरूलाई पनि पढ्न दिनोस्
थाइराइडको ग्रन्थी बढ्न थालेपछि हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थाल्छन् । अझ बच्चाहरुमा यो समस्या देखा पर्दा उनीहरुको विकासमा समेत असर पर्न सक्छ । त्यसकारण यसको सुधारका लागि घरमै भएका यी खानेकुरा खाने गर्दा धेरै राहत् महसुस गर्न सकिन्छ । तर कसैको अवस्था धेरै गम्भीर छ भने चाहिँ तुरुन्तै …
June 1, 2019	Health Comments Off on टाउको दुखिरहन्छ ? नखानुहोस् यी खानेकुरा
टाउको दुखाइबाट धेरै मानिसहरु ग्रसित भएको पाईन्छ । अस्तव्यस्त जीवन शैली, अस्वथकर खानपिन जस्ता कुराले मानिसको टाउको दुखाई दिर्घकालिन समस्याको रुपमा देखा परेको पाईन्छ । आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, चक्कर लाग्ने, वाक वाक लाग्ने, वान्ता हुने, घाम वा भीडभाडमा जाँदा टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने जस्तो …